Isijeziso Nesijeziso Sokuphuza Nokushayela e-UAE | Imithetho Yokuphuza Nokushayela e-UAE
Isijeziso Nesijeziso Sokuphuza Nokushayela e-UAE
Imithetho Yesiphuzo NeDrayivu ye-UAE
Nakuba ukushayela uphuzile noma yikuphi kuvame ukuheha izinhlawulo eziqinile, imithetho yokushayela uphuzile, okuhlanganisa nezijeziso, iyahlukahluka kuye ngamazwe. Yize i-United Arab Emirate (UAE) inomgomo wokungabekezeleli nhlobo ukushayela udakiwe, izivakashi eziningi, okuhlanganisa nabasebenzi abaphuma kwamanye amazwe, abazi ngemithetho yezwe yokushayela bephuzile.
Kwezinye izivakashi, ukuyengwa kwe-Dubai kanye nokuphila kwasebusuku kwe-UAE ngokushesha kuba yiphupho elibi lapho ziboshelwa ukuphuza nokushayela. Icala lokushayela uphuzile e-UAE lingaba nomthelela omubi, okuhlanganisa ukuboshwa, izinhlawulo ezinkulu, ukumiswa kwelayisensi yokushayela, nokuthathwa kwemoto yakho. Noma ngabe uyisakhamuzi noma uyisivakashi, kunezizathu eziningi zokuthi kungani ungaphuzi futhi ushayele e-UAE.
Umthetho we-UAE Wokuphuza Nokushayela
Yize kungelona icala ukuphuza utshwala e-UAE, izwe linemithetho eqinile ekuphuzeni ngokujwayelekile, ikakhulukazi ukushayela udakiwe. Ngokwesibonelo, akukho emthethweni ukuphuza phambi kwabantu, kuhlanganise nasemgwaqweni noma ngaphandle kwelayisensi. Kufanele futhi ube neminyaka okungenani engu-21 ubudala ukuze uphuze utshwala e-UAE.
Njengomvakashi noma ongaphandle, usadinga ilayisense yokuphuza utshwala, ngisho nasezindaweni ezifana namahhotela namakilabhu azimele. Ukwengeza, kufanele uthenge kuphela utshwala ezitolo zotshwala ezikhethekile nezinelayisensi. Ngokuvamile, imithetho eqinile yokuphuza yase-UAE ihloselwe ukunqanda ukushayela udakiwe.
Njengoba abashayeli abadakiwe babangela cishe u-14% wazo zonke izingozi zomgwaqo e-UAE, izwe linemithetho yethrafikhi eqinile kakhulu. Njengoba abashayeli abaphuzile besongela ukuphepha kwabo nabanye abasebenzisi bomgwaqo, imithetho eqinile, kuhlanganise nezijeziso ezinzima, iyasiza ekunqandeni umkhuba olimazayo. Ngaphansi koMthetho Federal we-UAE No. 21 ka-1995, ukushayela udakiwe kuyicala lobugebengu elinesijeziso.
Ngakho-ke, umthetho udinga ukuthi abantu bagweme ukushayela noma iyiphi imoto lapho bedakiwe noma bephuze utshwala nanoma yiziphi ezinye izinto ezidakwayo. Umuntu kufanele agweme ukushayela kungakhathaliseki ukuthi into esetshenzisiwe isemthethweni noma ayikho emthethweni. Ukwengeza, i-UAE ivame ukuchibiyela imithetho yayo yethrafikhi ukuze kwehliswe ukulimala kwezimoto emigwaqeni yayo.
Isijeziso Sokushayela Udakiwe e-UAE
Ngokuvumelana ne I-athikili No.49 ye-UAE Traffic Law, isephulamthetho sokuphuza nokushayela singaphansi:
ukuboshwa, kanye noma
inhlawulo engekho ngaphansi kuka-Dh25,000
Iphoyisa lingaphinda libophe umshayeli ngokwe-Article No.59.3 ye-Traffic Laws uma lisola noma lithola ukuthi umshayeli unecala:
ukubangela ukufa noma ukulimaza omunye umuntu ngenxa yokushayela ephuzile
ukulahlekelwa ukulawula imoto ngenxa yokushayela uphuze utshwala nanoma iyiphi enye into edakayo
Ukwengeza, inkantolo ingaphinde iyimise ilayisensi yokushayela yomuntu ophule umthetho wokushayela ephuzile isikhathi esiphakathi kwezinyanga ezintathu neminyaka emibili, kuya ngobucayi kanye nesimo secala. Ngaphansi kwe-Article No.58.1 yeMithetho Yethrafikhi, inkantolo inganqabela umuntu ithuba lokuthola ilayisensi entsha ngisho nangemva kokuphelelwa yisikhathi kwaleyo emisiwe.
Ngaphandle kwezinhlawulo eziqinile nemikhankaso eqhubekayo, abantu abaningi e-UAE, ikakhulukazi abangebona abezizwe, basaphuza futhi bayashayela. Kodwa-ke, kuyinzuzo yakho engcono kakhulu ukugwema ukushayela uphuzile. Ngaphandle kwezingozi ezisobala, i-UAE ijezisa kanzima izephula-mthetho zokushayela bephuzile. Uzifaka engozini futhi ngokwenza i-UAE yakho ihlale inzima kakhulu njengoba ungalahlekelwa amalungelo akho okushayela uma ulahlwe yicala lokushayela udakiwe.
Njengabantu abaningi abahlala e-UAE, kungenzeka ukuthi uthuthele ezweni ngenxa yamathuba alo ebhizinisi namathuba omsebenzi amahle kakhulu. Isimo sezulu esifudumele saleli zwe kanye nezinga lokuphila elingavamile mhlawumbe kwakuyizinye izinto ezikhangayo. Kodwa-ke, ukugwetshwa kokushayela uphuzile kungabeka engcupheni iphupho lakho futhi kuguqule ukuhlala kwakho kube yiphupho elibi. Kunemiphumela emibi yokushayela udakiwe e-UAE.
Ngaphandle kwezinhlawulo nokuboshwa, ukumiswa kwelayisensi yakho yokushayela noma ukuphucwa imoto kungaba nomthelela omubi empilweni yakho, okuhlanganisa nemizamo yebhizinisi. Usengozini yokulahlekelwa umsebenzi wakho wamanje. Noma ngabe uyisisebenzi esiphuma ngaphandle noma umhlali, ukugwetshwa ukushayela uphuzile nakho kunciphisa izinketho zakho zomsebenzi. Isibonelo, kungase kube nzima ukuthola umsebenzi kwezinye izimboni, kuhlanganise nemboni yezokuvakasha.
Ngokunjalo, kufanele ucabange ukuqasha ikhebhu noma ukuba nomshayeli oqokiwe njalo lapho uyophuza nabangane bakho noma izihlobo. Ngaphandle kwalokho, kufanele ucabange ukuphuza endaweni yokuhlala, okuhlanganisa nekhaya lakho, lapho ungadingi ukushayela khona ngemva kokuphuza ubusuku bonke. Ungaphinde ucabange ukunciphisa ukuphuza kwakho noma ukuyeka ukuphuza ngokuphelele. Ngokuvamile, ubusuku bokuphuza nokushayela akumele bubeke engcupheni amaphupho akho e-UAE, ikakhulukazi njengesivakashi, isisebenzi esingaphandle, noma usomabhizinisi.
Ukushayela udakwe utshwala noma izidakamizwa kungenye yezimbangela ezinkulu zezingozi zomgwaqo e-UAE. I-DUI (Ukushayela Ngaphansi Kwethonya) kanye ne-DWI (Ukushayela Ngesikhathi Udakiwe) yizindleko ezivamile, ikakhulukazi e-UAE. Sisebenza ngokukhethekileyo ekusingatheni amacala okushayela udakiwe, isivinini kanye nezinye izinhlobo zokwephulwa kwemithetho yomgwaqo. Izijeziso zokwephula imithetho ye-UAE elawula ukusetshenziswa kotshwala nokushayela zingaba zimbi futhi zingathinta isithunzi sakho, umsebenzi, ngisho nomndeni wakho.
Kwa-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, sisiza abantu abathweswe icala lokushayela bephuze utshwala.. Sihlinzeka ngosizo lwezomthetho lwamacala e-DUI nawe-DWI e-Dubai, e-Abu Dhabi, e-Sharjah, e-Ajman, e-Ras Al Khaimah, nakuwo wonke ama-United Arab Emirates. Singomunye wamafemu abeluleki bezomthetho abahamba phambili eDubai ukuhlinzeka ngosizo lwezomthetho lwebhizinisi, umndeni, izindlu nomhlaba, kanye nezindaba zamacala. Xhumana nathi namuhla!